ny antony mahatonga ny Arabo ankizivavy ‘tsy maintsy’ manambady
Ny fanambadiana dia eken’ny fenitra ara-tsosialy manerana izao tontolo izao, an-tapitrisany ny mpivady hanambady isan-taona. Na inona na inona ny sehatra iraisam-pirenena fantatra tsara hevitr’io, dia mety ho tonga eny amin’ny maha-mahasosotra lohahevitra iadian-kevitra ny olona sasany. Raha famatorana ny fatotra dia tsy voatery any amin’ny ankamaroan’ny firenena, dia matetika heverina ho toy ny fepetra ao amin’ny mpandala ny nentin-drazana any amin’ireo firenena, ny tontolo Arabo tafiditra. Ho an’ny Arabo ny vehivavy, indrindra indrindra, ny fanambadiana dia tsy maintsy fotoan-dehibe iray, fa amin’ny toe-javatra maro mety mitaky ny fametrahana rehetra tanjona sy ny nofinofy ankoatra. Araka ny tatitry ny UNICEF, ny iray avy ny zazavavy dimy tany amin’iny faritr’i MENA iny no manambady alohan’ny tonga ny taona. Ny fanambadiana no zavatra izay no nanery ny tao Arabo tanora, indrindra fa ny vehivavy, ary izy ireo raha sahy tsy hankatò, ny valifaty dia avy hatrany. Eto, dia ny folo antony mahatonga ny fiaraha-monina fanerena tanora vehivavy an-fanambadiana, ary nahoana izany hevi-diso maintsy ho voasazy izy — ary haingana. Ny tanora vehivavy ‘s mbola vita ny fianarany na ny fandefasana ny asany. Na dia tsara kokoa, ny tanora vehivavy ‘s mbola nipoitra ho toy ny mahaleo tena ny olona avy tamin’ ny ray aman-dreny mpiambina. Manomboka ny fianakaviana talohan’ny miaina ny fiainana sy ny fahadisoana tokony ho tokony tsy ho nametraka fepetra takiana mba ho vavolombelona toy izany tany am-boalohany eo amin’ny fiainana. Ny vehivavy dia azo antoka ny ho avy amin’ny alalan’ny kalitaon’ny fampianarana, miroborobo ny asa, ary tsara ny fifandraisana. Tokony na iza na iza hanipy izay rehetra hatrany ho an’ny fahafahana ny maimaika mahasoa ny fanambadiana. Hitako fa tsy misy fiarovana sy ny fahamarinan-toerana tamin’ny fanapahan-kevitra toy izany raha manontany ahy. Ny fanambadiana dia afaka misolo tena marina ny fifandraisana eo amin’ny roa olona amin’ny alalan’ny izay afaka mitarika ny fuller sy sambatra kokoa ny fiainana. Fa mety koa hiteraka ny tsy namokatra sy manimba fifandraisana. Noho izany, aho milaza fa ny fanambadiana dia tokony tsy hitranga satria ‘ilaina’ ny ampahany ny tsingerin ny fiainana, fa satria izany no irina. Ny fanambadiana tsy manana ny optimum fotoana hitranga tsy tokony ho ny nanonona ny fotoana maharitra. Raha toa ka na inona na inona, dia tokony hatao fahatsiarovan-tena. Ny ankamaroan’ireo vehivavy mila, fara fahakeliny, roa-polo amby telo-polo minitra mba haka ny akanjo ny andro fa ny eo ho eo ny ora isan-kerinandro. Tsy mino amim-pahatsorana mifidy ny fiainana mpiara-miasa ho na inona na inona mora kokoa. Ny tiako holazaina dia afa-miasa, ny fahazoana ny tokony ho izy ny fanabeazana, ny mahita ny talenta, nitety an’izao tontolo izao, sy ny fivoriana vaovao ny olona, inona no mety aminareo angamba no tsy mahazo manambady. Ny iray dia afaka manontany tena ho an ny taona tsy nahita valiny. Saingy tsy ho an’ny olona rehetra sy ny vehivavy sasany — mino na ny tsy — tsy te-hanan-janaka, ka dia tokony tsy ho menatra noho izany. Inona ny fiaraha-monina mieritreritra ny amin’ny maha-olona ianao no tena hajaina na inona na inona firenena Arabo, dia raha ny heviny dia tanteraka ny mitsara sy tsy invasive ny fiainana manokana. Izany lojika tanteraka ho an’ny olona ny mieritreritra ny tsy fanaovana ny fanambadiana ho an’ny olona sasany ny fotoana dia midika hoe misy zavatra ara-batana na ara-tsaina ratsy anao. Ny zavatra hafa manodidina ny hevitrao milanja mihoatra noho ny fanapahan-kevitra fa ny mety ho endriky ny sisa amin’ny fiainanao, marina. DISO. Ny ankamaroan’ny Arabo ray aman-dreny manana izany ao an-tsaina fa ny zatovovavy iray ihany soa aman-tsara indray mandeha izy dia manana ny vadiny. Izy ireo tsy dia matahotra momba ny tsy azo antoka dia mety hiatrika taty aoriana eo amin’ny fiainana. Ny fomba hafa mety ‘marefo’ ny vehivavy azo antoka ny ho avy ny hafa noho ny fitiavana ny fiadiana ny olona zara raha fantany. Soso-kevitra: Satria matoky, mahaleo tena ara-bola, tsara manodidina, ary nahita fianarana.
Ny famaritana ny tonga lafatra vady maro firenena Arabo matetika dia midika hoe ny lehilahy amin’ny marin-toerana ny asa, ny trano ho an’ny tenany ihany, ary ny fiara. Na iza na iza no hilaza tsara fo, ny fikarakarana, be fitiavana, sy tia tena.
Tsara, fotsiny aho hahita ny tenako ho manan-karena ny olona iray izay afaka hividy amiko rehetra-ny fanajana sy ny saina aho izay mila fanampiana. Amin’ny tsy maneso, matomatotra kokoa, izany fotoana avo dia mahamenatra intsony ny tenantsika ho toy izany ny antitra ny fisainana sy ny nivoatra lasa ny adidy izay tsy nametraka ny zon’ny vehivavy voalohany
An-tserasera Niaraka vavahadin - insider soso-kevitra ho an'ny Fiarahana lahy insiders →